Kalfadhiga 7aad ee Baarlamaanka oo maanta furmaya iyo Warbaahinta madaxa bannaan oo loo diiday - Jowhar Somali news Leader
Home News Kalfadhiga 7aad ee Baarlamaanka oo maanta furmaya iyo Warbaahinta madaxa bannaan oo...
Kalfadhiga 7aad ee Baarlamaanka oo maanta furmaya iyo Warbaahinta madaxa bannaan oo loo diiday
Waxaa goor dhow la filayaa inuu furmo kalfadhiga 7aad ee Labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, kaasoo lagu wado inuu noqdo kalfadhigii u dambeeyay, maadaama muddo xileedka labada Aqal uu dhamaad yahay.
Kalfadhiga 7aad ayaa ka duwan kuwii hore, iyadoo Baarlamaanka ay hor-yaallaan sharciyo muhiim u ah geeddi socodka hannaanka doorashooyinka ee la filayo inuu dalku galo bilaha soo socda iyo horaanta sanadka soo socda ee 2021.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa la filayaa inuu kalfadhiga furo oo uu ka jeediyo khudbadiisa dastuuriga ah, waxaana kalfadhiga furitaankiisa ka dhici doonaa Xarunta Villa Hargeysa.
Farriimo loo diray Xildhibaanada labada Aqal ayaa lagu wargeliyay in kalfadhiga 7aad uu ka dhacayo xarunta Villa Hargeysa, halkii markii hore loo qorsheeyay inuu ka dhaco Dugsiga Booliska ee Jen. Kaahiye, halkaasoo mar kasta Kalfadhiga Baarlamaanka la furayo lagu qaban jiray Munaasabad furitaanka
Wararka qaar ayaa sheegaya in sababaha Xarunta Villa Hargeysa loogu soo wareejiyay Furitaanka kalfadhiga 7aad ay la xiriirto codsi ka yimid Madaxtooyada, halka warar kalena ay sheegayaan arrimo farsamo iyo mid amni ay la xiriirto.
Warbaahinta madaxa bannaan ayaa loo diiday inay ka qeyb galaan furitaanka Kalfadhiga 7aad, waxaa kaliya loo ogolaaday warbaahinta dowladda, muddooyinkii u dambeeyay warbaahinta madaxa bannaan ayaa cabasho ka muujinayay in aan loo diido ka qeyb galka fadhiyada Baarlamaanka.
Kalfadhiga 7aad ee Baarlamaanka Labada Aqal ayaa noqon doona kii u dambeeya ee Baarlamaanka 10aad ee hadda jira, kaasoo muddo xileedkiisa uu gabogabo yahay.
War Deg-deg ah;Qarax is miidaamin ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho